Roobab Daadad Wata oo Da'ay iyo Soomaaliya oo Xilli Roobaad Aaran Ah Gashay Warbixin.
Tuesday May 02, 2017 - 11:59:47 in Wararka by Super Admin
Inta badan gobollada dalka Soomaaliya waxaa ka curtay Roobabka Guga kadib Abaar sanad jirsatay oo halakeeyay dadka iyo duunyada.
Sawir muujinaya tacabka beeraha sh/hoose
Waxaa dhammaaday waqtigii abaarta wuxuuna dalku gelayaa xilli Barwaaqo ah insha’allaah, 18-ka gobol ee uu ka koobanyahay dalka Soomaaliya ayay roobabku ka da’een waloow aysan isku mid aheyn.
Roobab Mahiigaan ah oo ay ku diirsadeen dadka iyo duunyada ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka da’ay gobollo ay kamid yihiin Bay,Bakool, Sh/dhexe,Sh.Hoose,Mudug,Hiiraan,Galguduud iyo Togdheer.
15 maalmood ka hor waxaa xilli bar Barwaaqo ah uu ugalay gobollada Jubbooyinka iyo Gedo oo Roobabkii ugu horreeyay ee Guga ay ka da’een sida ay SomaliMeMo u sheegay dad ku sugan gobolladaasi, Biyaha Xareedda ayaa dhax ceegaaga Waraha,Balliyada iyo waddooyinka Biya Fadhiisadka ah.
Gobollada Bay iyo Bakool oo abaaraha ugu daran ay kajireen ayay Roobab Mahiigaan ah ka da’een waxaana naq fiican helay xoolihii yaraa ee dadka ubadbaaday halka kumanaan qoys ay dib ubilaabeen tacbashada beeraha.
Gobollada Togdheere,Sool,Sanaag iyo Mudug iyana waxaa ka da’ay roobab lagu diirsaday inkasta oo gobollada qaar roobabku ku yaryihiin hadane waxaa la dhihi karaa waa biloow wanaagsan oo waxaa la rajeynayaa in roobku isdaba xigsado.
Gobollada waqooyi Bari Soomaaliya sida Nugaal iyo Bari dhulka Miyiga ah waxaa lagasoo sheegayaa roobab.
Dhinaca kale gobollada dhexe waxay kamid yihiin gobollada xilliga aaranka ah uu u galay laba isbuuc ka hor markii ay xareeddu ku roobtay, gobollo ay kamid yihiin Hiiraan,Galguduud iyo shabeelaha dhexe roobabku waa kuwa aan kala joogsi laheyn oo saacad walba ka da’ayay degmooyinka iyo deegaanada gobolladaasi.
Magaalada Ceeldheer oo Galguduud katirsan waxaa ka da’ay Roobab biyo badan dhigay waddooyinka magaalada mana jirin wax dhibaata ah oo soo gaaray dadka shacabka ah.
Wariye ku sugan Ceeldheer ayaa kusoo warramay in Roobabka oo muddo saacada ah da’ayay ay magaalada iyo dhulka miyiga ah ee hoos yimaad ka dhigeen qaboow waxaana meesha ka baxay hurkii kuleylka ee abaarta laga dhaxlay.
Guddiga ganacsatada degmada Ceeldheer ayaa gurmad dhan walba ah ufidiyay dad nafaqa darro iyo baahi lakici waayay kuwaasi oo ku xoola beelay abaarta.
Halkan ka dhageyso Warbixin ku saabsan Roobka Ceeldheere MP3
Dhammaan magaalooyinka iyo degmooyinka gobollada Hiiraan iyo shabeelaha dhexe ayay Roobab mahiigaan ah ka da’ayeen sida magaalooyinka Beled Weyne,Aadan Yabaal,Shaaw, Buula Burte,Mahadaay iyo deegaano kale.
Sh/dhexe waxaa la sheegay in waddooyinka muhiimka ah ee isku xira degmooyinka ay go’anyihiin sid Mahadaay iyo Jalalqsi, Biya Cadde illaa iyo dhulka Beeraha leh ee Carra Madoowda loo yaqaan.
Gobollada sedaxda ah ee uu maro wabiga shabelle ayaa lafilayaa in isbuucyada soo socda ay ku dhuftaan fatahaadaha biyaha wabiga.
Waxaa dib usoo noqotay rajadii shacabka waxaana ceel kusii dhacaya niyad jabkii abaarta laga dhaxlay.
Inkastoo abaartu ay xoola tirtay kumanaan qoys oo soomaaliyeed hadane waxay rajaynayaan in ay ka booga dhaydaan oo ay ka faa’iideystaan raxmadda Roobka.
Abaartu ma ahan kaliya in ay xoolaha dhameysay balse waxaa kale oo ay wadatay cudurro laayaan ah oo gallaaftay nolosha boqolaal qof waxaas oo idil maanta meesha waa ay ka baxeen alxamdulillaahi…alxamdulillaahi qof walba marka uu roobsado waa in uu ku afqabsadaa مطرنا بفضل الله ورحمته
Weerar Safballaaran Ah Oo Lagu Qaaday Saldhigyada Ciidamada Itoobiya Ee Degmada Waajid.